[अन्तर्वार्ता] विप्लवलाई सरकारले यसै ठूलो बनाइदियो : मोहन वैद्य
फरकधार / चैत ३०, २०७५
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव मोहन वैद्य ‘किरण’सँग सरकारका गतिविधि, समसामयिक राजनीति, उनले नेतृत्व गरिरहेको पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीको अवस्था आदिबारे फरकधारकर्मी रमेश दवाडीले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, वैद्यसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईंले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) ले अहिले के गर्दै छ ?
पार्टी संगठनलाई अलि व्यवस्थित बनाउन लागिरहेका छौँ । संगठन विस्तारको काम भइरहेको छ । पार्टीको सदृढीकरण गर्ने काममा पनि छौँ । हाम्रा विभिन्न जनवर्गीय मोर्चालाई व्यवस्थित गराउने प्रक्रियामा लागिराखेका छौँ । पार्टीको सबै संगठनलाई व्यवस्थित र सुदृढ गर्ने प्रक्रियामा छौँ । संगठनसँग सम्बन्धित कुरा, राष्ट्रियता, जनजीविका, जनसरोकारका विषयमा संघर्षको माहोल बनाउनेतर्फ हामी लागिरहेका छौँ ।
भर्खरै हाम्रो मेची–महाकाली राष्ट्रिय जनजागरण अभियान समाप्त भएको छ । अहिलेका समस्याहरू, जटिलताहरू छन्, यिनलाई लिएर एउटा संघर्ष गर्न सकिन्छ, तर अहिले वातावरण छैन । एउटा माहोल बनाउन भने लागेका छौँ ।
पार्टी ओझेलमा परेको, कुनामा परेकोजस्तो लाग्दैन ?
हामी मूलधारमा छैनौँ । यो सत्य हो । मूलधारका पार्टी भनेका त अहिले सरकारमा गएका दल हुन् । हामी सरकारमा त के कुरा, सत्तापक्षमा पनि छैनौँ । हामी सत्ताको पनि विरोधमा छौँ । प्रतिपक्षमा पनि हामी छैनौँ । हुने कुरो पनि भएन । हामी त आन्दोलनकारी हौँ । संघर्षकारी हौँ । यो सत्ता व्यवस्था ठीक छैन, एउटा जनताको सत्ता स्थापना गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ ।
तपाईंको पार्टीको खास नीतिचाहिँ के हो ?
नेपालमा क्रान्ति भएको छैन । देश अझै उत्पीडनमा छ । दलाल पुँजीपति वर्ग, सामन्ती वर्गको आन्तरिक उत्पीडनमा छ । बाह्य हस्तक्षेप छ । साम्राज्यवादी, विस्तारवादी हस्तक्षेपहरू छन् । यी सबै उत्पीडन, हस्तक्षेपविरुद्ध हामीले आवाज बुलन्द पार्नुपर्छ । नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नुपर्छ । नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै वैज्ञानिक समाजवादतर्फ लाग्नुपर्छ ।
त्यसका लागि फेरि सशस्त्र संघर्ष नै गर्ने हो ?
अहिले त हामी जनआन्दोलनको संघर्ष गनुपर्छ भनेर लागेका छौँ । सशस्त्र संघर्ष त आवश्यकताअनुसार गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । अहिले नै ठ्याक्कै सशस्त्र संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने होइन । पार्टीको त्यस्तो सोच पनि छैन । अहिले हामी जनआन्दोलन, जनसंघर्ष गर्छौं ।
वर्तमान सरकारलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?
उहाँहरूले त एकदम सफल भयो भन्नुहुन्छ । कम्युनिस्ट सरकार भन्नुहुन्छ । हामीले भन्दा उहाँहरू कम्युनिस्ट नै होइन । पुरानै राज्यसत्ताको संरक्षक सरकार हो यो । यो सरकारसँग देशको विकास गर्ने एजेन्डा पनि छैन । गर्न पनि सक्त्तैन । भन्न त ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भनेर उहाँहरूले भन्दै आउनुभएको छ । त्यो सबै भन्ने कुरा हो । देशमा एउटा रोजगारीको व्यवस्था नगरीकन, उद्योग व्यवसायको निर्माण नगरीकन र वैदेशिक हस्तक्षेप, निजीकरण, उदारीकरणलाई शिरोपर गरेर विकास निर्माण हुन सक्त्तैन । उहाँहरूले त्यो गर्ने पनि होइन ।
शिक्षा, स्वास्थ्यमा भएका समस्याहरू वर्र्षौंदेखि समाधान हुन सकेका छैनन् । समस्या ज्युँका त्युँँ छन् । शिक्षाको व्यापारीकरण भइरहेको छ । त्यसको पनि उहाँहरूले हल गर्न सक्नुहुन्न । भ्रष्टाचार, बलात्कार, महँगी इत्यादि त थुप्रैथुप्रै छन् । त्यसैले सरकारले काम गर्न सक्त्तैन । हामी यसलाई कम्युनिस्ट सरकार भनेर पनि मान्दैनौँ ।
नेक्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसलाई तपाईंको पार्टीले कसरी लिएको छ ?
सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनु गलत छ । राजनीतिक दल हो, राजनीतिक दलका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ । वार्ता गर्ने भए वार्ता गर्नुपर्यो । राजनीतिक तबरबाट यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ । दमनले, यातनाले र पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएर समस्या समाधान हुँदैन । प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।
विप्लवका पछिल्ला गतिविधिलाई चाहिँ कसरी नियाल्नुभएको छ नि ?
विप्लवको गतिविधि, विप्लवको राजनीति ठीक छैन । उहाँहरू एकीकृत जनक्रान्तिको सिद्धान्त भन्नुहुन्छ । त्यो असाध्यै अस्पष्ट छ, अमूर्त छ । यो ठीक छैन । यतिसम्म चाहिँ हामी क्लियर छौँ । रहस्यमयी छ विप्लवको राजनीति । उहाँले के गर्न खोज्नुभएको हो, थाहा छैन । जनक्रान्ति गर्न खोज्नुभएको हो कि के हो, थाहा छैन । तर, राजनीतिक पार्टी त हो । राजनीतिक पार्टी भएको हुनाले यसै भन्न सकिन्न । उहाँको राजनीतिक दिशा अलमलमा छ ।
विप्लवका गतिविधि हिंसात्मक भयो भन्ने छ नि ?
सशस्त्र संघर्ष गर्न थाल्यो भन्ने भान परेको छ, त्यो हुँदै होइन । हामी सेनालाई पनि केही गर्दैनौँ, प्रहरीलाई पनि केही गर्दैनौँ भनेर उहाँहरूले भनिरहनुभएको छ । सरकारले फेरि उसलाई ठूलो किन बनाइदिनुपर्यो ? यही सरकारले उहाँलाई ठूलो बनाइदिएको छ । यो सरकारको काम हो ।
अर्को प्रचण्डको जन्म हुन लाग्यो भन्छन् नि ?
के, को जन्मिनी ? यो हल्ला हो । प्रचण्ड जन्मे पनि काम छैन । जनयद्धको हाइटमा उभिने पनि होइन । त्यसकारण, यसलाई त्यो रूपमा चाहिँ लिनुहुन्न ।
हिजो तपाईं, प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई सँगै हुनुहुन्थ्यो । अहिले तपाईंहरू तीनजना तीनतिर हुनुहुछ । एउटा पार्टी थियो, पाँचवटा बनेको छ । यस्तो किन भयो ?
पार्टी विभाजित हुँदा दुःख लाग्छ । जनयुद्धको बेला मूल नेतृत्व प्रचण्डबाटै भइरहेको थियो । उनी पनि बिग्रेर गइसकेपछि झन् हामीहरूसम्म विभाजित भयौँ । यो दुःखद् हो । बाबुरामजीले माक्र्सवाद नै छोड्नुभयो । वैचारिक रूपमा उहाँ अस्पष्ट हुनुहुन्छ । ठीक ढंगले सोच्नुभएन भन्ने लाग्छ । अब पनि यही कुरा गरेर मात्रै त भएन ।
अर्को कुरा के हो भने सच्चा क्रान्तिकारीहरूलाई गोलबन्द गर्नुपर्छ । यो दिशामा हामी लाग्छौँ । लागी पनि रहेका छौँ । गलत चिन्तन, प्रवृत्ति, अवसरवादसँग जुध्दै सच्चा कम्युनिस्टहरूको एउटा राम्रो संगठन बनाउने र क्रान्तिकारीहरूलाई गोलबद्ध गराउने पक्षमा हामी छौँ ।
तपाईंको पार्टीको अर्को कुनै पार्टीसँग एकता हुँदै छ ?
कुराकानी छ, भइहाल्छ । गोपालजीहरूसँग नि कुारकानी भएको छ । हामीले प्रयास गरेका छौँ । त्यो निश्चित रूपमा अगाडि बढ्छ । कोसँग के–कस्तो हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न सक्ने कुरा भएन । हाम्रो के हो भने, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने प्रयासचाहिँ जारी छ ।
अहिले तत्काल एकता प्रक्रिया अगाडि बढेको चाहिँ छैन ?
छलफल गरेका छौँ । विचार मिल्यो भने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
एमालेसँग पार्टी एकता गरेर प्रचण्ड सरकारमा हुनुहुन्छ । उहाँप्रति तपाईंको टिप्पणी के छ ?
व्यक्तिगत त केही छैन उहाँलाई । पार्टी एकता गरेर सरकारमा जानुभएकोप्रति हामीले पहिल्यै विरोध गरेका थियौँ । ‘माओवादी केन्द्र थियो, यो एमालेमा विलय भयो’ भनेर हामीले पहिल्यै भनेका थियौँ । अत्यन्त गलत काम गर्नुभयो प्रचण्डजीले ।
केपी शर्मा ओलीले पाँच वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गर्न सक्नुहोला ?
गाह्रो छ । ओलीजीले गर्न गाह्रो छ । बाहिरका कुरा सुन्ने त बेग्लै कुरा भयो, उहाँ आफ्नै पार्टीभित्रकाहरूको पनि कुरा सुन्नुहुन्न । सबै ठाउँमा विकास भइसकेको छ भन्नुहुन्छ । तर, भएको केही पनि छैन । त्यसले गर्दा उहाँको नेतृत्वमा पाँच वर्ष पूरा गर्न निकै गाह्रो छ । उहाँ भाषण बढी, काम कम गर्नुहुन्छ । जनस्तरबाटै उहाँको आलोचना भइरहेको देखिन्छ ।
एकथरी मान्छे मोहन वैद्य मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्थे । अहिले एउटा सानो पार्टीमा सीमित हुनुभयो । पदप्रति तपाईंको कुनै मोह भएन किन ?
यो पुरानो सत्ताको त म हुँदै हुन्न । पुरानो सत्ता, पश्चगामी सत्ताको मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुने त कुरै भएन । मन्त्री हुनैपर्छ भन्ने खालको मोह मलाई भएन । जनताको सत्ता ल्याउनका निम्ति जे गर्नुपर्छ, जनताको सत्तामा एउटा जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने कुरा सही हो । त्यो के हो भने, जनताको सत्ता कहिले हुने हो, के हो, अहिलेसम्म त हाम्रो समय संघर्षमा नै ठीक भयो । त्यसकारण, पुरानो सत्ताको केही पनि मोह छैन मलाई ।
देशलाई रूपान्तरण गर्नका निम्ति, नयाँ समाज निर्माणको निम्ति रगत–पसिना जनताले धेरै बगाए । तर त्योअनुसार हुन सकिरहेको छैन । यो स्थितिमा निराश हुन हुँदैन । हामीले मिहिनेत गर्नुपर्छ । परिश्रम गर्नुपर्छ । जनताका सपना निश्चित रूपमा साकार हुन्छन् । यसका निम्ति सचेत ढंगले जनताले रूपान्तरणको अभियानमा विगतमा जस्तै भविष्यमा पनि विशेष आकर्षणसहित अगाडि बढ्नुपर्छ ।